Cristiano Ronaldo oo diray fariin ku saabsan cudurka Coronavirus – Gool FM
Cristiano Ronaldo oo diray fariin ku saabsan cudurka Coronavirus
(Yurub) 13 Mar 2020. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Juventus iyo xulka qaranka Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa fariin u diray taageerayaashiisa, sababa la xiriira faafitaanka cudurka Coronavirus, kaasoo gabi ahaanba curyaamiyay tartamada Yurub.
Cristiano Ronaldo ayaa fariin uu ku soo qoray boggiisa rasmiga ah ee Instagram-ka wuxuu ku sheegay:
“Adduunka wuxuu marayaa xilli aad u adag, kaas oo u baahan inaan sameyno dhamaanteen dadaalka ugu sarreeya”.
“Maanta waxaan kuula hadlayaa ma ahan sida ciyaartooy ahaan kubadda cagta, laakiin sida wiil, aabe iyo qof xiiseeya dhacdooyinka cusub ee adduunka iyo cudurka Coronavirus ee saameynaya adduunka oo dhan”.
“Waa muhiim inaan dhamaanteen raacno tilmaamaha Ururka Caafimaadka Adduunka iyo tilmaamaha dowladaha kala duwan ee ku saabsan sida loola tacaali karo xaaladda jirta” ayuu qoraalkiisa ku soo xiray Cristiano Ronaldo.
Vinicius Jr oo shaaca ka qaaday sababta uu Real Madrid kaga door biday Barcelona